Isityalo esine-Wool yokuluka eDalang WG
Utywala bokwenza isityalo eDalang-ijezi yokhuseleko efanelweyo, ijezi yesikhululo seenqwelomoya
Uhlobo: Iyunifomu eyolukiweyo yepolisa
Inkqubo: Ukuthungwa kwe-7GG Ribbed
Iimbonakalo: Ukuhombisa, ukuthunga iintyatyambo, ukuthunga amalaphu, ukugcina ukufudumala
Ukusukela ngo-2006 i-WG ibibonelela ngeempahla ezisemgangathweni zeNkampani kunye neNtengiso yezinto kubathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Abaqulunqi bethu, nangona bebalasele kangakanani, unokuqiniseka ukuba baya kuhlala bekumamela kwaye bafumane uyilo oluhambelana neemfuno zakho zeeyunifomu ezifanelekileyo, ezinomtsalane nezinexabiso elifanelekileyo.
Wonke umntu unomsebenzi wakhe osebenzela ukhathalelo lwempilo, ukubuk 'iindwendwe, amashishini, ishishini, urhulumente okanye imfundo. Emva koko sinokukunceda ngeeyunifomu zomgangatho ngexabiso elifanelekileyo. Xa ungasebenzi, ungathanda ukunxiba ezakho iimpahla. Khetha i-WG yoyilo olwenziweyo okanye isitayile osifunayo.
I-WG Knitwear ngokuzingca yenza uluhlu lweempahla ezifanelekileyo kumashishini, abathengi bezikolo kunye neeklabhu kumzi-mveliso wethu. Iipullovers, iicardigans kunye nevesti, ezinxibe nzima zingenziwa ngoboya, lambswool, cashmere, mohair, silk, cotton polyester edibeneyo okanye uboya i-acrylic yarn ethafeni okanye ngeendlela ezahlukeneyo zemigca. Uyazuza kuludwe lwethu olukhulu lwemibala esemgangathweni kwaye uqale ngobungakanani be-1 kuvavanyo; sikugcina isitokhwe esandleni semibala ethandwayo kunye nezitayile ezilungele ukuhanjiswa okukhawulezayo. Sinokukwazi ukuba neodolo yakho yenziwe yahonjiswa licandelo lethu langoku lokuhombisa kunye nesikolo sakho okanye iqumrhu elinamaxabiso ngamaxabiso afanelekileyo.
Egqithileyo Elungiselelweyo V-intamo uboya ivesti ovaroli
Okulandelayo: I-cardigan yefashoni yabasetyhini
Umvelisi weSweater Knitting
Ukuveliswa kwejezi yokuLuka
Umboneleli weSweater yoMthengisi
Yenza ijezi yakho
Isitayile sePepey yokuLungiselela
Siko ezinithiweyo Retro ezinemibala patch ...